Coma (ကိုမာဝင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » Health A-Z » Coma (ကိုမာဝင်ခြင်း)
Coma (ကိုမာဝင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
• ခန္ဓါကိုယ်က မတုံပြန်နိုင်တော့ခြင်း (အလိုအလျောက် တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းတွေတော့ မပါပါဘူး)
• ဆီးချိုသွေးချို ဖြစ်ခြင်း။ ဆီးချိုသွေးချို ဖြစ်နေတဲ့ လူတွေရဲ့ သွေးတွင်း သကြားဓါတ်ဟာ တက်လိုက်ကျလိုက် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒါက ကိုမာဖြစ်စေပါတယ်။
• အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လပ်ခြင်း။ အောက်ဆီဂျင် ကြာရှည်ပြတ်လပ် တာကလည်း ကိုမာဝင်စေပါတယ်။ (ဥပမာ- နှလုံး ရုတ်တရက်ဖောက်ခြင်းကို အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ထားရခြင်း)
Coma. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coma/basics/definition/con-20028567. Accessed Jul 13 2016
Coma: Types, Causes, Treatments, Prognosis. http://www.webmd.com/brain/coma-types-causes-treatments-prognosis?page=1. Accessed Jul 13 2016
What isacoma? http://kidshealth.org/en/kids/coma.html. Accessed Jul 13 2016
Coma. http://www.nhs.uk/Conditions/coma/Pages/Introduction.aspx#what-coma-means. Accessed Jul 13 2016